လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) က ဂျပန်ရေတပ်ရဲ့ ခြေဖျားတောင် မမှီဘဲ ခိုးထားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ လေကျယ်နေတဲ့ တရုတ် - Top MM News
တရုတ်က စစ်အင်အားကြီး ဘာညာလုပ်နေတာ၊ သူ့မှာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအစုတ်တစ်စီး ဖြစ်ဖြစ်မည်အောင် ရှာထားရတာ။
စိတ်ဝင်စားလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဂျပန်ကိုကြည့်လိုက်တာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအကြီး ၁၅၊ အလတ် ၅၊ အသေး ၅ တဲ့။ ကြမ်းချက်။ ဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာပတ်သိမ်းဖို့လုပ်တာ။
အခုတောင် ဂျပန်မှာ ဥပဒေနဲ့တားထားလို့ မထုတ်တာ၊ တရုတ်က လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရပြီဆိုတော့ ဂျပန်လွှတ်တော်ကပြန်ဆောက်ခွင့်ပြုလို့ ပြန်ဆောက်တာပြီးပြီ ရေချတော့မယ်ပြောတယ် (အရင်က ဟယ်လီကော်ပတာတင်တဲ့ သင်္ဘောကိုပြန်ပြီး modified လုပ်တယ်ပြောတယ်)။ နည်းပညာကွာတယ်ဆိုတာပြောချင်တာ။
China’s President Xi Jinping swears under oath after being elected forasecond term during the fifth plenary session of the first session of the 13th National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 17, 2018.
China’s rubber-stamp parliament unanimously handed President Xi Jinpingasecond term on March 17 and elevated his right-hand man to the vice presidency, giving himastrong ally to consolidate power and handle US trade threats. / AFP PHOTO / Greg Baker
တရုတ် ဘာကောင်ကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာ ခုထိ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမဆောက်နိုင်သေးဘူး ဆိုတာတော့ သေချာတယ်။ မဟုတ်ရင် သူများအဟောင်းဘယ်ပြန်ဝယ်မလဲ။ ရှိတဲ့နည်းပညာအများစုကလဲ မနည်းခိုးထားရတာ။
လူအင်အားသာတာကလွဲလို့ တကယ်ဖြစ်ရင် တခြားမှာဘယ်လိုမှယှဉ်ရမယ်မထင်ဘူး။ (Kyaw Kyaw Sai)
သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး
ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ဦး သေတမ်းစာရေး၍ ကျောင်း၌ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး